Community & Society » ကူးလာပြီး လာတင်ပါတယ်	23
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: မြန်မာပြည်ကအဘတို့ကဒီလောက်မရဲသေးလို့နေမှာပေါ့ကိုပေ။
ဦး ဂျစ် says: ဟုတ်ပ …
ဆံရစ်ဝိုင်း မေလေး says: မေလေးတို့ဆီက လူကြီးတွေက ခန်းခန်းနားနားဖြစ်လေ ကြိုက်လေမို့ပါ ကိုကြီးပေရဲ့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုပေ
mobile (mandalay) says: ကိုပေရေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
padonmar says: ကျမ အမှတ်မမှားရင်တော့ ထိုင်းဘုရင် ဘူမိဘောက 85 နှစ်ပြည့်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။အဖေနဲ့ အသက်တူလို့ မှတ်ထားမိလို့ပါ။
mobile (mandalay) says: မှန်ပါတယ် မဒုံမာရေ ကျနော်မှားတာ နေမှာဗျ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: လုံမ သိထားတာဆိုရင်တော့ အခုလက်ရှိထိုင်းဘုရင်က အသက် (၁၉) နှစ်မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာပါတယ်..အမေရိကန်နိုင်ငံ (သူကြီးအဆိုအရ အမေရိက) မှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့..သူ့ကိုယ်သူ ဘုရင်ဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝမမျှော်လင့်ထားပါဘူး…ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့ရှေ့မှာ ထီးနန်းဆက်ခံမယ့် ဦးရီးတော်တွေအများကြီးမို့လို့ပါတဲ့..ဒါပေမယ့် သူ့အသက် (၁၉)နှစ်မှာပဲ အားလုံးကွယ်လွန်သွားကြလို့ ထီးနန်းဆက်ခံမယ့်သူမရှိဖြစ်ပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တဲ့…(ဧည့်လမ်းညွှန် ပြောတာကတော့ သူတို့တွေက အမျိုးအချင်းချင်းပြန်ယူပြီး သွေးချင်းရောကြလို့ အသက်တိုကြတယ်တဲ့… အခုဘုရင်ကတော့ အမျိုးကိုယူထားတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပဲ..)
mobile (mandalay) says: ဘုရင်တွေ အမျိုးပြန်ယူရင် အသက်တိုတယ်ဆိုတာကို ငြင်းတာမဟုက်ပါဘူးခင်ဗျ
မောင်ပေ says: ဒီလိုဆို
koaung says: ဪသူလား အသက်ကြီးပေမဲ့ လန်းတုန်းနော့ ကုသိုယ်ကောင်းပါ့ဗျား (အိမ်ကမိန်းမလိုဘဲ) ဟီးဟီး အရဂါးနောက်တာ
padonmar says: ယင်လပ်လည်း ဒီဈေးတန်းထဲရောက်ခဲလို့သာ ဖုန်းကင်မရာတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံဝိုင်းရိုက်နေတာပေါ့။
etone says: လူကြားထဲ သွားရဲတယ်ဆိုတာကလည်း …. လူမုန်းများစရာကိစ္စမျိုး သိပ်မလုပ်ထားခဲ့ဖူးလို့ .. သူ့လိပ်ပြာသူလုံလို့ဖြစ်မယ် .. အဟဲ … ဒီကဟာတွေလည်း … လူကြားထဲ အဲ့လိုလေး သွားကြည့်ပါလား … ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းခံရမယ့်ကိန်း … အဲ့ဂလိုကို … ကြည်ညိုချစ်ခင်ကြတာ .. ခွစ်ခွစ် … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1148
ရဲစည် says: ကျနုတ် သတ်မဒကြီး ဖြစ်ပါက
မိုချို says: …….ဒ်ါယင်းလက် လှချက် ကတော့ တကယ်ပါပဲ။ …….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 437
Thu Wai says: :*:
ဖိုးထောင် says: အောင်မငီး မြတ်စွာဘုရား ရင်လပ်ဘယ်တုန်းက သမ္မတဖြစ်သွားပါလိမ့် နာလည်းမတိလိုက်ပါလား အန်ကယ်မိုဘိုင်းက အမှားတွေရေးပြီး ဆာဗာကြီးလေးအောင်လုပ်နေတာပဲနော် …….. ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
မောင်ပေ says: အားလုံးကို ပလက်စ်ဝမ်းပေးပါတယ်
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: တော်တော်ခက်တဲ့လူဒေ
ဖါတစ်လုံးဂေါင်းဂျားနှလုံးမူပြီးဒဂေါင်ထဲ ဟုတ်ပါဘူးယောင်လို့ ဂဒေါ့ဂဒေါ့ တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်တော် အိုင်စီဝိုင်းနဲ့ ဝမ်းမန်းရှိုး မျောက်ဖိုးစိန်လိုကပြမယ်ဆိုရင်
အာမခံနိုင်ကြမလား ( ဗျောင်းဗျန်တွေးရရင်တော့
သူဘဲမြှောက်ပေးတာ ဘယ်သူနဲ………………….မှမတူပါနဲ့ဆိုလို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: တစ်နေ့နေ့တော့ မြန်မာပြည်က လူကြီးလူကောင်းတွေလဲ အဲလို လာလိမ့်မပေါ့
P chogyi says: တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုတွေရှိလာရင်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ကျုပ် သမဒဂျီး ဖြစ်တဲ့အခါ
တွေးလိုက်မိသေးရဲ့ …. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1322
မင်းနန္ဓာ says: အဲဒါ မရင်လတ်